रमेश प्रसाई र नन्दाका फ्या’नहरुका लागि अहिलेसम्मकै खु:शीको खबर (भिडियो सहित) – Ap Nepal
भिडियो हेर्न तल लिंकमा क्लिक गर्नुहोला ।
Prevप्र्याङ्क गर्न गएका यी युवाको भयो रा,मधुलाई , हेर्नुस प्र्यांक गरेको भन्दा पनि जंगी बाबाले छो;डेनन् (भिडि’यो सहित)
Nextलोडसे,डिङ सुरु भकै हो ? जनताले खोजे कुलमानलाई, के भन्छ प्राधि’करण ? (भिडियो सहित)
ह्वात्तै बढ्यो सुनको मुल्य , तोलाको यसरी भयो कारोवार हेर्नुस
अमृताले मृ. त्यु पुर्वक बनाएका भिडियोहरु टिक-टकभरी भाइरल-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
ह्वातै घट्यो सुनको मूल्य, यसरी हुदैँ कारोबार हेर्नुस